Haweenay ay Somaliland u xirtay Calanka Somaliya oo shaqo laga siiyey Wasaaradda Warfaafinta - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Haweeney kasoo jeeda magaalada Boorame oo muddo laba jeer ay maamulka Somaliland u xireen Calanka Soomaaliya oo ay mar ku lebisatay, mar kalena gogol ka dhigatay ayaa xil looga magacaabay Wasaaradda Warfaafinta iyo Dalxiiska xukuumada Soomaaliya.
Degan Cumar Daahir ayaa la kulantay madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo, kadibna waxaa loo wareejiyey Wasaaradda Warfaafinta, iyadoo loo magacaabay La-taliyaha Wasiirka ee dhinaca dhaqanka iyo Dhiirigelinta Dalxiiska.
Xilka ayaa lagu magacaabay wareegto kasoo baxday Wsiirka Warfaafinta Cismaan Abuukar Dubbe.
Previous articleMaxaabiistii ka baxsatay Xabsiga Weyn ee Kenya oo la qabtay iyagoo Somaliya kusii jeeda (Sawirro)
Next articleMaxay tahay digniinta hordhaca ah ee Mareykanku siiyey Diyaaradaha tegaya magaalada Addis Ababa?